नेपाली तरीकाले विवाह गर्न नेदरल्याण्ड र फिलिपिन्सदेखि पोखरामा अाइपुगे यि जोडी ! - Babal Khabar
पोखरा : को’भिड— १९ का कारण सन् २०२० को सुरुदेखि विश्व पर्यटन उद्योग संकटमा छ।
एक शहरबाट अर्को शहर, एक देशबाट अर्को देशमा यात्रा अझै सहज नहुँदा पर्यटन उद्योग सं’कटमा परेको हो।
को’रोना सं’कटको समयमै एक जोडी पर्यटकले भने आफ्नो लामो समयदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरे।विवाह गर्ने स्थान उनीहरुले नेपाल रोजेका छन्।
नेदरल्याण्डका ३३ वर्षका विलियम जोन बोस्मा र फिलिपिन्सकी ३२ वर्षीया मारिना मेण्डोजा बुलाङले आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अस्थाम गाउँ रोजेका हुन्।
विलियम र मारिना पञ्चेबाजा बजाएर अस्तामको देउराली पुगेका थिए। स्थानीय जन्ती र बेहुली पक्ष पनि पञ्चेबाजाको तालमा नाच्दै देउरालीको मन्दिरमा पुगे। देउराली मन्दिरमा पनि बेहुला बेहुलीले सँगै जीवनयात्रा अघि बढाउने कसम खाए। देउराली मन्दिर पुगेर पञ्चेबाजा सहित फर्केर अन्नपूर्ण इको भिलेज पुग्दा स्थनीय आमा समूहले रत्यौली खेलेका थिए।
रत्यौलीको गित र पञ्चेबाजाको धुनमा बेहुला बेहुली नाचेका थिए। विवाहको चाजोपाँजो अन्नपूर्ण इको भिलेजका सञ्चालक विश्व राज अधिकारीले गरेका थिए। यसमा साथ र सहयोग मारिनाकी नेपाली दिदी कमला घलेले गरेकी थिइन्। मारिना तीन वर्षअघि नेपाल आएकी थिइन्। उनी त्यती बेला अन्नपूर्ण इको भिलेज र घलेको घरमा बसेकी थिइन्।
विलियम र मारिनाले नेपाली परम्परागत शैलीमा विवाह गर्नु अघि कास्की जिल्ला अदालतमा कोट म्यारिज गरेका थिए। उनीहरुले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गर्न निवेदन दिएका थिए।
एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेको निवेदनको आधारमा सोही संहिताको दफा ८० को उपदफा (२) बमोजिम कास्की जिल्ला अदा’लतले बिवाह दर्ताको प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ। उनीहरु अविवाहित हुन् होइनन् भन्ने एकिन भएपछि मात्र अदालतले दर्ताको प्रमाण पत्र दिएको थियो।
नेपाल विवाह र हनीमुनका लागि गन्तब्य बन्न सक्छ
कोभिडका कारण विश्वका धेरै देश बन्द भएको यो अवस्थामा नेपाल खुला रहेकोमा आफूहरु नेपाल सहज रुपमा आउन पाएको भन्दै उनले भने, ‘सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्कन लागेका थियौं। नेपाल कोरोना संक्रमणको समयमा पनि सुरक्षित महसुस गरेर बस्यौं।’
विलियम र मारिनाको विवाहबाट कोरोना संकटमा पनि नेपाल सुरक्षित छ र खुला छ भन्ने सन्देश गएको अन्नपूर्ण इको भिलेजका संचालक विश्वराज अधिकारीले बताए। नेपाललाई हनिमुन र विवाहको डिस्टिनेसनको रुपमा विकास गर्न यस्तै विवाहका कार्यक्रम थप सहयोगी हुने भएकोले पनि विलियम र मारिनाको विवाहमा आफूले सक्दो सहयोग गरेको अधिकारीले बताए। अन्नपुर्ण पोस्टबाट साभार गरियको खबर ।
Prevनुनमा हुन्छ तपाईलाई करोड पति बनाउने शक्ति, मात्र यो उपाय अपनाउनुहोस् !
nextपहेलो दाँतबाट छुटकारा यसरी पाउन सकिन्छ ! अाजै ट्रार्इ गर्नुस